Islamic Archives - Daryeel Magazine
1. Tawbada: Bini’aadanka waxaa ka dhaca dambiyo & qaladaad sababtoo ah ma nihn kuwa dhameystiran. Haddaba waa in aad mar kasta Alle dambi dhaaf weydiisataa, si dhab ahna ugu toobad keentaa. Kana fogaataa in aad dambi sameyso. 2. Salaada: Tuko Shanta salaadood si joogta ah. Ilaali waqtiga Salaadaha. Baro Axkaamta Salaada. 3. Quraanka: Aqri Quraanka, Baro macnihiisa, fahan Xikmadaha Alle …
Ka Faaidayso Talooyinkan Qiimaha Badan
1- Ka fogow malaha xun, aad nasiino iyo raaxo heshide 2- Welwel oo dhan waxaa keena Allaah oo aad ka jeedsato, ee u noqo Allaah. 3- Tuko salaad qabriga kula gasha 4- Haddaad maqasho ruux ku xamanaya ku dheh “Alle ka cabso” 5- Joogteyso akhrinta suuradda Tabaarak, waa badbaadisee. 6- Cayr waa qofka aan salaad ku khashuucin indhihiisuna Alle dartiis …
10 Calaamadood oo Iimaanka Daciifka ah
1. Qofka oo caadeysta in uu Dambi u sameeyo si joogta ah, isagoo aan u arkayn in uu dambi sameynayo, waxa uu sameynayana u yeelaya qiil & marmarsiinyo 2. Qalbiga oo u adkaada sidi dhagaxi heer uu gaaro qofku in qalbigiisa ku raaxaysto heesaha iyo muusika laakiin Quraanka aan aqrin, markuu maqlo aan waxba dareemin, wacdiga iyo khayrkana is dhaafiyo …
Walaasheyda Muslimada ah….
Walaasheyda Muslimada ah… 1. Ha barin gabadhaada sida loo ciyaaro, Bar sida Salaada loo tukado 2. Ha barin sida loo heeso, Bar sida Quraanka loo aqriyo 3. Ha ku qurxin make up badan iyadoo yar, Bar sida la isu asturo oo Xijaab loo xirto 4. Hadii lagu soo waco ama albaabka la soo garaaco ha ku oran “Hooyo ma joogto …
Hadii aad salaad dukanaysid , Ka taxaddir Qalbigaaga. ( ka dhig qalbigaaga qalbi Alle (SW) u qushuucsan ) Hadii aad wax cunayso , Ka taxaddir waxa aad Dhuunta marinayso. ( iska ilaali in aad wax xaaraan ah cunto ) Hadii lagu marti qaado , Ka taxaddir Indhahaaga. (Waa in aad xakamaysaa naftaada oo aad xushmaysaa cida ku marti galisay). Hadii …
Markasta oo aad dareentid inaad halawsantahay nolosha, oo aanad garanayn wadadaada ama ujeedada nolosha aanad garanayn, Markasta oo aad dareentid in aanad garanayn halka aad wax ka bilaabtid, DUCADAAN DHEH, Markasta oo dareentid inaad qariib tahay oo aad isleedahay cid ku fahmaysa ma jirto ama cid ku maqlaysa ma jirto, DUCADAAN DHEH. Markasta oo aad dareentid naftaada inay luntay oo …
Sheikh Ibne Sammak ( naxatiistii janno alle ha siiyo) ayaa mar booqday nin boqor ahaa, Markii uu la kulmay boqorkii waa uu salaamay, isla xilligaana ninkii boqorka ahaa waxa uu gacanta ku haystay koob biya ah . Intaa kadib ninkii boqorka ahaa waxa uu ku yidhi sheekhii . ” Sheekhow bal waxa aad i siisaa talo ” Kadibna Sheekhii waxa …
Xaqiiqooyin Ku Saabsan Dumarka Musliimiinta
XUSUUS-QOR DHAKHTAR-ILKOOD Waa Barnaamij Taxane ah oo ay idiin soo diyaariso Drs.Hibaaq Buubaal. Qeybtaan ayay dhakhtaraddu uga hadlaysaa xuquuqda iyo qiimaha ay diinta islaamku siisay gabadha muslimadda iyo weliba horumarka ay dumarku musliimiintu ay gaadhsiiyeen diinta islaamka. Daawasho Wacan:
Qiso Cajiib Ah: Imaam Shaafici Ayaa……
Imaamkii weynaa Allaha u naxariistee Imaam Shaafici ayaa wuxuu Macalin u ahaa Arday, wuxuuna aad u Jeclaa Wiil yar oo Ardayda ka mid ah, dabeedna Ardaydii kale baa Waalidiintoodii u Sheegeen in Macalinkooda Ardaygaan uu Jecel yahay, Waalidkii baa u yimid Imaamka si ay Arintaas uga Wareystaan Imaamkii wuxu yiri:- Wiilkaan waa Wiil aad u Cajaa’ib badan, sidaas darteed ayaan …
Aan Ku Xasuusiyo
Soo dhawow. Aan isu kaa sheego. Waad I ilowsantahay. Waxaan ahay Geeri. Haa Geeri. Waad iga naxday soomaha?. Waa caadi dadkuba dhamaantood waa sidaa. Adiguna iyagaad ka mid tahay. Cabsi ayay dareemaan markay I maqlaan. Argagax iyo baqdin ayaa ku dhacda markaan la kulmo qof iyaga ka mida. farxadda iyo qosolka ayaan ka qaadaa aayar. Nolol iyo raaxo ay ku …
Qaneecadu waa inuu qofku ku qanco waxa Alle (SW) uu qaybshay ,mu’minka dhabta ahna waa ka rumaysan in wixii Alle( SW) uu qoray aysan cidkale qaadanyn islamarkaasna uu Alle xikmadiisa ugu qaybiyo si cadaalad ku jirto,tusaaale ahaan xaga khalqiga Alle waa kala duway abuuristooda xaga middabka,xaga dhererka,luuqadooda iyo afkooda xikamad buuna Alle ka yeelay sidaa uu Alle noogu sheegay kitaabka …
Nin dhalinyaro ah ayaa waxa uu soo xaadiray ( yimid) aaska saaxiibkii, kadibna isagii oo kor taagan qabrigii saaxiibkii ayaa waxaa su’aal waydiiyay nin oday ahaa oo ay isgaranayeen ( isyaqaaneen) , su’aashuna waxa ay ahayd – Hadii saaxiibkaa uu Alle ( swt) dib u soo nooleeyo maxay kula tahay in uu samayn lahaa ? Kadibna ninkii dhalainyarada ahaa waxa …
Nin dhalinyaro Muslim ah oo aad ugu ad adag Diintiisa ayaa hada ka hor soo raacey Dayuurad dabeedna markii mudo hawada lagu jirey ayaa ninkii waxaa u timid gabar ka mid ah shaqaalaha dayuurada oo Sida Qamri, laakiin ninka oo ahaa qof Alle siiyey iimaan ayaa Yiri: “Maya Uma Baahni Mahadsanid”. Xoogaa ka dib misana waxaa u yimid isla Gabadhii …
Sheekh Axmed Deedat Iyo Jawaabtii Cajiibka Ahayd!!
Sheekh Axmed Deedat wuxuu mudo ka badan 40 sano waday Dacwada Islaamka, wuxuu doodo adag la galay rag badan oo hogaamiyaal Diimo kale sheegan jiray mar kastana ka guuleysan jiray. Wuxuu dhiirigeliyay, macalin & tusaalena u noqday Dr. Zakir Naik oo hada kaalintiisi buuxiyay. Wuxuu caan ku ahaa inuu si kulul ugu jawaabo cid kasta oo Diinta balad ka aaminsan …
Qaawanaan Qurux Maahan, Talo ku socota Dumarka
Quruxda dumarku ma aha dharka ay xirato, jismiga ay xambaarsan tahay, waxa ay dhabankeeda ku dhaashato, iyo habka ay u shanleysato timaheeda. Quruxda dumarka waa in ay ka muuqato gudaha indhaheeda, sababtoo ah taasi waa irridka Qalbigeeda. Quruxda dumarku ma aha bar (dhibic madow) oo dhabanka ku taal, qeyb jirka ka mid ah oo la baneeyo, balse quruxda dhabta ah …